Naagihii Habar-majeerteen Oo 6 Maalmood Gudahood Looga Diley 28 Nin Gobalada Mudug, Nugaal Iyo Bari – Codka Qaranka Tanadland
Naagihii Habar-majeerteen Oo 6 Maalmood Gudahood Looga Diley 28 Nin Gobalada Mudug, Nugaal Iyo Bari
Soomaalidu Gunta Habar-majeerteen Waxay U Taqaan Niman Jilicsan, Oo Aan Weligood Maalin Qura Kulay Ku Tahay Aan Rag Iska Dhicin. Waana Sababta Loo Yiraahdo "Inta Habar-majeerteen Ah Iyo Halawash Naagaa Leh!!. Hawraar kalena Waxay Ahayd "Bal Car Dirir Kaluun Lama Dabtee Waa La Diriraaye".
Furinta Gobalka Bari :-
Gunta Habar-majeerteen xasuuqii joogtada ahaa ee uga socdey gobalka mudug ayaa weli halkiisii ka socda. Hadana waxaad moodaa ugaarsiga lagu hayo gunta Habar-majeerteen in uu ku soo xoogeysanayo gobalka Bari. 6 Maalmood gudahood waxaa beesha Habar-majeerteen looga diley 28 nin. Qasaaraha dhaawaca ah oo loo geystey maxaysatada Habar-majeerteen na wuxuu kor u dhaafay 47 ruux.
Jimcihii ina dhaafay oo ay taariikhdu ahayd (01/09/2017) waxaa si xeeladaysan loogu diley degaanka (Af-urur) 13 nin oo maxaysato ah. Kedib markii ciidamada geesiyiinta ah ee isbahaysiga Ujeedo-badan, oo kal hore 74 nin oo Habar-majeerteen ah ku xasuuqay degaanka (Af-urur) dagaal mir ah. Ay inta buuraha ka soo degeen goor habeen ah oo ay yimaadeen tuulada (Af-urur). Meel qaadka ay ka iibsadaan mooryaanta Habar-majeerteen ay 2 miino oo kuwa meelaha fog-fog laga hago ah ay ugu xireen. Oo Dabeed maalintii danbe markay meeshii ku soo xoomeen ay labo goor miino ku xasuuqeen.
Furinta Gobalka Mudug :-
Todobaadkii ina dhaafay gudihiisii, labo goor oo is xiga weerar dooxatayn ah oo ay beesha Sacad ku qaadeen gunta Habar-majeerteen waxay uga dileen 11 nin. Dooxatayn taas aya waxay ka dhacday bariga gobalka mudug. Todobaadkii ina dhaafay waxaa sidoo kale soo galay Buurtinle iyo magaalada Gaalkacyo qoysas jifada (Mahad-qoyane) ah oo ka soo qaxay tuulada Balibusle. kedib markii niman yar oo dooxato ah oo beesha Sacad ah, markii labaad ay dad ku laayeen sanad kaan gudihiisa. Weeraradaas oo goor habeen ah intay niman dooxato ahi tuulada galeen ay rag xayn ah labada goorba ay ku laayeen.
Furinta Gobalka Nugaal :-
Habeen hore goor fiid danbe ah magaalada Burtinle baasha ay ka degaan beesha Habar-majeerteen, waxaa la keenay 4 nin oo meyd ah oo ay laysay beesha (Bah-ararsame). Beesha (Bah-ararsame) oo ah beesha curadka u ah beelaha Dhulbahante, ayaa degaamo ku leh magaalada Buurtinle degaamada uga aadan waqooyi-bari. Sida ay sheegeen shacabka magaalada Burtinle, 4-ta nin oo mahbarka ah ee ay laysay beesha Dhulbahante ayaa la toogtey iyaga oo aan wax xabad ah ridin. Waxaana toogtey niman dooxato ah oo iskumar toogtey. Waxaana lagu laayey dhulka u dhexeeya (Qoriley) oo ay degto beesha Bah-ararsame iyo (Buurtinle).
Beesha Habar-majeerteen iyo jifada Wagardhac dhawaan waxay ku qaadeen beesha Sacad dhawr weerar, weerarodaas oo ay uga laayeen beesha Sacad dhawr iyo toban nin. Weerarodaas ujeedada ay beesha Habar-majeerteen ka lahayd waxay ahayd in beesha Sacad cadaadis la saaro. Kedib markii oday yaasha beesha Sacad debac iyo carab-jalqis siyaado ah laga dareemay. Oo shir kasta oo loogu yeeraba ay gogoshiisa iska tegahayaan.
Naflacaarinimada iyo sida ay u rabto gunta Habar-majeerteen inay isaga kala yarayso xasuuqa joogtada ah ee mudad dheer ku socdey, oo ay xamili la-dahay. Waxaa daliil u ah, mudo 2 sanaddood gudahood ah waxay heshiisyo la galeen beesha Sacad 14 jeer. Heshiisyadaas oo kuligood beesha Habar-majeerteen ay ku baryootantay in beesha Sacad ay la heshiiyaan. Kuligoodna wada fashilmay oo ku fashilmay mudo gaaban. Marka hada ah waxaa magaalada Gaalkacyo la filayaa inay ku kulmaan labo nin oo Dhulbahante iyo Mareexaan ah, oo la hubo inay ku faraxsanyihiin xasuuqa joogtada ah ee ku socda gunta Habar-majeerteen. Habar-majeerteen kuna waxay ka dhursugayaan labadaan nin, maadaama heshiisyadii ay iyagu beesha Sacad la gelijireen ay ka quusteen.
Mar aan la hadalay magaalada Buurtinle, waxaa la’ii sheegay inay Habar-majeerteen ay ku heshiiyeen in aysan ka aarsan, oo aysan fursad siin beesha (Bah-ararsame) oo ay ujeedadoodu tahay inay ciidamada Somaliland u adeegsadaan Habar-majeerteen. Oo marka uu dagaal dhaco ay gu gumaadaan ciidamada Somaliland maxaysatada taagta daran ee Habar-majeerteen.
Beesha (Bah-ararsame) oo ah hogaanka dhaqanka iyo siyaasadda ee beesha Dhulbahante, ayaa dhowaan gebi ahaanba waxay qaateen kaararka codbixinta Doorashada soo socota ee ka dhici doonta Somaliland. Wakhti madaxweynaha Khaatumo halyey (Prof. Cali Khaliif Galayr) uu sixiixay heshiiska Khaatumo iyo Somaliland dhexmaray. Marka beesha (Bah-ararsame) waxay haysataa fursad dahabi ah oo ay ku xasuuqdo maxaysata naflacaariga ah ee Habar-majeerteen.
Mideeda kale kale, waxaa xusid mudan in beesha (Bah-Ararsame) oo ah beesha ugu xargo-xirka iyo xeeladda badan beelaha Dhulbahante. Ay ahayd beesha degaanada Dhulbahante ka xoraysay gunta Habar-majeerteen. Kedib markii ciidamada geesiyiinta ah ee beesha (Bah-Ararsame) oo mudo todobaad ah isku urursanayey banaaka magaalada Lascanod, ay subixii taariikhdu ahayd (15/09/2007) ay weerareen maleeshiyada beesha Habar-majeerteen. Markuu mudo gaaban uu dagaalku socdeyna ay dagaalka ku soo biireen ciidamada mujaahidiinta ah ee Somaliland, halkaasna xasuuq ba’an loogu geystey gunta Habar-majeerteen iyo midiidin kooda oo lagu gumaaday.
Sababta beesha (Bah-Ararsame) ay u weerartay gunta Habar-majeerteen na waxay ahayd, beesha Habar-majeerteen oo isugu tagtay lafta (Bah-Ararsame) kuna xasuuqay dagaaladii ka dhacay degaanka Cagaare sanadkii 2007 -ka. Dagaaladaas oo ay ka qayb qaateen maleeshiya beeleedka Habar-majeerteen oo dhan. Laakiin nasiibdaro hal laf oo qura mooyaane lafaha kale ee Dhulbahante umaysan soo hiilin beesha (Bah-Ararsame).